eNasha.com - बचाऊ भन्दा उल्टै जेल !
बचाऊ भन्दा उल्टै जेल !
आफ्नो श्रीमानको सुरक्षा गरिपाऊँ भनी एउटी महिलाले अदालतमा हालेको मुद्दामा अदालतले उल्टै श्रीमान् र उनलाई जेल चलान गर्ने आदेश दिएको छ ।
एपी समाचार संस्थाका अनुसार प्रहरीले केही समयअघि श्रीमान्-श्रीमती शाहजिना तारिक, २६, र सुमैल राज, ३१, लाई पक्राउ गरेको थियो । ती दुवैले आफूलाई आफ्ना परिवारबाट ज्यान मार्ने धम्की आएको र आफ्नो बचाउ गरिदिन प्रहरीलाई अनुरोध गरेका थिए । तर १६ वर्षअघि सुमैल राजले आफ्नो लिङ्ग परिवर्तन गरी पुरुष भएको भनी थाहा हुन आएपछि प्रहरीले उनीहरुमाथि झूटो सूचना दिएको आरोपमा जेल चलान गरेका थिए । अदालतमा पनि उनीहरुमाथि झूटो बोलेको आरोप प्रमाणित गरिएको छ ।
लाहोरस्थित उच्च अदालतले दुवैलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिएको थियो । यी श्रीमान्-श्रीमतीले आफन्तहरु आफ्नो ज्यान लिने ताकमा रहेको भन्दै प्रहरीको संरक्षणमा गएका थिए । आफन्तहरुले उल्टै उनीहरुले झूट बोलेको र यी समलिङ्गी भएको भनी मुद्दा हालेपछि यिनलाई जेल चलान गर्ने अदालतले निर्णय सुनाएको हो ।
अदालतमा सुमैलले आफू लोग्नेमान्छे भएको दाबी गरेका थिए, तर अदालतका वकिलहरुले सुमैल नारी भएको र आफ्नो स्तन र योनीको शल्यक्रिया गरी पुरुषमा परिणत भएको बताएपछि तिनलाई जेल चलान गर्ने निर्णय सुनाएका थिए ।
सुमैल १६ वर्ष लाग्दा-नलाग्दै स्वर परिवर्तन भई पुरुषजस्तो भएको र दाह्री जुँगा पलाउन थालेपछि बाध्य भएर यौन सर्जरी गरी पुरुष भएको अदालतलाई बताएका थिए । अदालतले उनको पुरुष अङ्ग छ छैन भनी जाँच गर्दा उनको लिङ्ग नभएको पाएका थिए । उनको योनी सर्जरी गरी पुरिएको थियो ।
आइतबार यी श्रीमान्-श्रीमतीलाई अदालतबाट जेल चलानको क्रममा एपीसँग कुरा गर्दै भने- "तारिकसँग गम्भीर प्रेम भएपछि मैले उनलाई बिहे गरेको हुँ । उनको अर्कै केटासँग मागीबिहे छिनिन लागेको थियो । तारिक चाहिँ मागीबिहेको पक्षमा थिइनन् ।"
यी दुवैको घर फैसलाबादमा रहेको छ । सुमैलले भने- "उनी मकहाँ आइन् र आफ्ना काकाहरुले ऋण तिर्नका लागि बेच्न लागे मलाई बचाऊ भनिन् । मैले पनि एउटा मर्दले गर्नुपर्ने काम गरेको हुँ । मैले शाहजिनालाई पहिले नै लिङ्ग परिवर्तन गरिसकेको र यसो गर्न दुइ पटक अपरेशन गरिसकेको बताएको थिएँ । उनले आफूलाई लिङ्गभन्दा पनि सुरक्षा चाहिएको बताएकी थिइन् ।"
यता सुमैलकी श्रीमती शाहजिना पनि आफ्नो जीवनसाथीको यौनपरिवर्तन अनभिज्ञ चाहिँ छैनन् । एकअर्काको सुरक्षाका लागि उनले सुमैलसँग बिहे गरेको एपीसँग स्वीकार गरिन् । उनले भनिन्- "मलाई थाहा छ, सुमैल 'लोग्नेमान्छे' होइन । ऊसँग पुरुष लिङ्ग छैन भनेर उसमाथि फरक दृष्टिले हेर्नुपर्ने कुनै कारण पनि देख्दिनँ । मात्र हामीलाई सुरक्षा चाहिएको छ ।"
"हामी केही समयभित्रै फैसलाबाद छाडेर अन्यत्रै घर बसाउनेबारे सोचिरहेका थियौँ", उनले भित्री कुरा खोतल्दै भनिन्- "तर योजना सफल हुनुअघि नै हाम्रो सबै कुरा चौपट भयो ।"
यता उच्च प्रहरी अधिकृत अस्लम तरिनले शाहजिनाले आफ्ना काकामाथि लगाएको 'बेच्ने तयारी गरेको' आरोपमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन् । तर यो अपराध नै नभएका कारण यी दुवै चाँडै जेलबाट मुक्त हुनसक्ने तरिनको भनाइ थियो । राज र तारिकलाई लाहौरस्थित राजको आफन्तको घरबाट पक्राउ गरिएको थियो ।
यस्तो पनि ! मुद्दा मामिला समलिङगी माओवादी संविधानसभा हल्ला awards मोबाईल सेलेब्रिटी पेट्रोल अनुभव hi-life crisis streets celebrity events festival